Dib -u -eegista Buugga Anshaxa Shanaad | 2022 | Wareegga Maalka
Bogga ugu weyn Dib U Eegista Buugga Shanaad | 2022
Haddii aad waligaa lahayd caado xun, waxaad isku dayday inaad ka gudubto, waxaad ogaan doontaa ilaa inta edebtu noloshaada ka bedeli karto. Anshaxu waa ficil ku dheggan habka ugu wanaagsan ee ficilka iyada oo aan loo eegin waxa xakamaynta rabitaankaada.
Edbintu waxay muujinaysaa xakamayn waxayna caawisaa shaqsiyaadka inay si hufan u shaqeeyaan.
Anshaxa Shanaad Peter Senge ayaa ina tusinaysa sida shaqada joogtada ah ee edbinta naftaada iyo ururkuba u horseedo nidaam hufan oo waxtar leh.
Dib -u -eegiddu waxay ku jiri doontaa buugga shanaad ee edbinta.
Mawduucyada ugu Muhiimsan ee Anshaxa Shanaad
Tani waa hab ay ururadu ku baraan xubnahooda sida loogu heellan yahay shaqadooda si loo kobciyo horumarka ururka.
Buugga Anshaxa Shanaad ee uu qoray Peter Senge wuxuu edbinta hor dhigayaa ururrada wuxuuna ka dhigay goobo waxbarasho oo dhan-kale oo loo yaqaan mawduucyo.
Ururka ayaa la lafaguraa guud ahaan waxaana loo maamulaa hal unug. Marka urur loola dhaqmo sidii hal hay'ad, waxay sahlaysaa in si hufan loo maareeyo.
2) Barashada Kooxda
Shakhsiyaadka ayaa si dhakhso ah wax u barta marka ay ku jiraan kooxaha halkii ay ka ahaan lahaayeen shaqsiyaad kaliya. Xubnaha ururku waa inay isu yimaadaan si ay midba midka kale wax uga bartaan maxaa yeelay waxay dhiiri gelin doontaa barashada iyo wada shaqaynta xubnaha dhexdooda ah.
3) Qaababka Maskaxda
Fikradaha dadku waxay saameeyaan ficilladooda waxayna saameeyaan go'aanadooda kala duwan.
Shakhsiyaadka ka shaqeeya shirkad waa inay marka hore beddelaan qaababkooda maskaxeed oo ay ka fikiraan caqiidadooda guud taas oo mustaqbalka fog gacan ka geysan doonta ka gudubka xaddidnaanta awoodda kala sarraynta ee ururada.
4) Kartida Shaqsiyeed
Tani waa kartida shakhsiyaadka si ay u ahaadaan kuwo firfircoon xitaa marka cadaadis la saaro.
Shakhsiyaadka ayaa awood u leh inay xal u helaan dhibaatooyinka waxayna xoogga saaraan inay gaaraan natiijooyin. Waxay sii wadaan barashada si ay u helaan habab wax -ku -ool ah oo ururka loo maamulo.
5) Aragti Wadaag
Shaqaalaha ka shaqeeya shirkad ama shakhsiyaadka ka tirsan ururka waa inay la wadaagaan aragti isku mid ah shirkadda ay u shaqeeyaan ama ururada ay ka tirsan yihiin.
Kaliya marka aragtida shirkad iyo shaqaalaheeda ay is waafaqaan ayaa la gaari karaa aragtideeda iyo ujeeddooyinkeeda.
11 -ka Xeer ee Anshaxa Shanaad
Qeybtan dib -u -eegista buugga shanaad ayaa diiradda saareysa 11 -ka sharci.
1) Dhibaatooyinka maanta waxay ka yimaadaan xalalkii shalay
Tani waa marka aadan ka fiirsan cawaaqibka xallinta “Degdegga Degdegga” ah oo waxyeello u geysan kara urur mustaqbalka fog.
2) Markasta oo aad sii riixdo, ayaa ka sii adag nidaamku inuu dib kuu riixo
Peter Senge wuxuu sharraxay in markaan soo saareyno xalalka annaga oo aan ka fikirin iyo qorsheyn habboon, waxaa suurogal ah inay mustaqbalka horseedo dhibaatooyin badan.
3) Dabeecadu si fiican ayay u koraan inta aanay xumaan
Anshaxa Shanaad Peter Senge wuxuu sharxayaa in dadaal badan oo aad ku bixisid isku dayga inaad si hufan u shaqayso, in badan oo ururku kaaga baahan doono.
4) Habka ugu fudud ee looga bixi karo inta badan wuxuu dib u soo celinayaa
Si xoog leh loogu riixo xalalka la yaqaan iyo tilmaame lagu kalsoonaan karo ee fekerka aan nidaamsanayn, iyada oo aan la helin tababar wax ku ool ah iyo nidaam lagu ogaado qaladaadka, cilladaha ayaa loo arki doonaa kuwo aan waxtar lahayn.
Kani waa kii afaraad sharciyada dib -u -eegista buugga anshaxa.
5) Daawadu way ka sii xumaan kartaa cudurka
Peter Senge wuxuu ku qoray edbinta shanaad “Mararka qaarkood xalka fudud ama la yaqaan ma aha oo kaliya mid wax -ku -ool ah, marna waa balwad iyo khatar.
Waqtiga fog, cawaaqib xumada ugu badan ee adeegsashada xalalka aan nidaamsanayn ayaa ah baahida sii kordheysa ee xalal badan oo sii kordhaya ”.
6) Si degdeg ah ayaa loo gaabiyaa
Si si hufan loogu hirgeliyo isbeddelada habaysan, waxay qaadataa waqti iyo dulqaad si loo arko natiijooyinka.
7)Sababta iyo saamayntu iskuma dhowa wakhtiga iyo goobta
Inta badan saamaynta go'aammada lagu gaadho urur waxay qaadataa wakhti si loo arko ama loo ogaado. Mararka qaarkood waxay qaadataa toddobaadyo, bilo xitaa in la muujiyo.
8) Isbeddellada yaryar waxay soo saari karaan natiijooyin waaweyn-laakiin aagagga awoodda ugu badan leh ayaa inta badan ah kuwa ugu cad cad
Anshaxa Shanaad Peter Senge wuxuu qoray in “Wax ka qabashada dhibaatada adag badiyaa ay tahay arrin la arko halka ugu sarraysa ee wax-ka-beddelka, isbeddel kaas oo leh ugu yaraan dadaal-u horseedi doona horumar waara oo muhiim ah”.
9) Waxaad qaadan kartaa keegaaga oo aadna cuni kartaa-laakiin hal mar ma aha
Peter Senge wuxuu leeyahay tixgeli inaad ku dhegto badeecado iyo alaab tayo sare leh halkii aad xoogga saari lahayd wax-ku-oolnimada.
10) Maroodiga oo badh loo qaybiyo ma soo saarto laba maroodi oo yaryar
Mabda'a shanaad wuxuu dhigayaa "Waxa ka dhigaya mabda'a adag in lagu dhaqmo waa naqshadeynta ururada si dadka looga ilaaliyo inay arkaan isdhexgalka muhiimka ah".
11) Eed malaha
Halkan Peter Senge waxaa loola jeedaa sida shirkad ama urur ula dhaqmo dhammaan dhaqdhaqaaqyadiisa guud ahaan iyo sida xubin kasta uu door ku leeyahay horumarkiisa ama guuldarradiisa.
Kani waa buuggii shanaad ee dib -u -eegista sharciga 11aad.
Peter Senge wuxuu ku tilmaamay Anshaxa Shanaad inuu diiradda saarayo xallinta dhibaatooyinka kooxeed isagoo adeegsanaya Habka Fikirka Nidaamyada si loogu beddelo shirkadaha ururro waxbarasho.
Waxa kale oo uu siiyay shan mabda '/mawduucyo xukuma anshaxa iyo 11 sharci oo si ba'an u sharxaya.
Fikirka Nidaamka iyo sababta loogu magac daray Anshaxa Shanaad
Fikirka nidaamka waxaa loogu yeeraa Anshaxa Shanaad maxaa yeelay wuxuu ka kooban yahay dhammaan qeybaha kale.
Waa qaab -dhismeed arkaya oo qiraya isku -xidhnaanta iyo isku -xidhnaanta shanta hab -waxbarasho.
Si aad ugu guulaysato fikirka nidaamka, waa inaad gaarto dhammaan farsamooyinka iyo dhaqamada kale oo ay ka mid yihiin Xirfadda Shakhsiyeed, Habka Maskaxda, Aragga La Wadaago, iyo Barashada Kooxda.
Ku saabsan Buugga Anshaxa Shanaad | Dib u eegis
Peter Senge wuxuu qoray Anshaxa Shanaad. Waxa lagu daabacay Maraykanka oo Ingiriisi ah.
Daabacaaddii ugu horreysay ee ISBN 0-385-26095-4 ayaa markii ugu horreysay la daabacay 1990. Daabacaaddii labaad waxay ahayd 2006 oo leh ISBN 0-385-51725-4. Sannadkan waa sannad-guuradii 25-aad ee daabacaaddii koowaad.
Daabacaheeda rasmiga ah waa Lacagta.
Peter Michael Senge waa Saynisyahan Nidaamyada Nidaamyada Mareykanka iyo bare sare oo ka tirsan Dugsiga Maareynta ee MIT Sloan.
Isagu waa macallin Co ee Machadyada Nidaamyada Isku -dhafan ee New England iyo aasaasaha Ururka Barashada Abaabulka.
Wuxuu ku dhashay 1947 (74 sano), Stanford, California, Mareykanka.
Waxbarashadiisu waxay ahayd Machadka Teknolojiyadda Massachusetts, Jaamacadda Stanford.
Anshaxa shanaad Dib u eegista Buugaagta
Dib -u -eegista Buugga Anshaxa Shanaad wuxuu sharraxayaa barashada hababka abaabulka.
Peter Senge wuxuu soo bandhigayaa urur wax barasho iyo sida ay shirkad uga dhigi karto mid xitaa ka guul badan tartameheeda.
Waxa uu sharaxay in shirkadu si ay u maamusho suuqa, ay tahay in ay barato dhammaan waxa ku jira ganacsigeeda. Dunidu maalin walba way isbedeshaa, shirkaddu si ay u guulaysato waxay ku xidhan tahay hadba sida ay wax u bartaan iyo sida ay si fudud ula qabsan lahaayeen hal-abuurnimada.
Senge wuxuu iftiiminayaa shan qaybood oo sameeya urur waxbarasho. Waxay yihiin fikirka Nidaamyada, Xirfadda Shakhsiyeed, Qaababka Maskaxda, Barashada Kooxda iyo Aragga La Wadaago.
Xagga xerta Senge waxaa loola jeedaa qaab -dhismeed ay tahay in la barto oo la barto si looga faa'iidaysto. Wuxuu sharraxay in xertu ay aad uga badan tahay sida mid wax uga barto urur kale.
Anshaxa shanaad Peter Senge wuxuu dhigayaa in fikirka nidaamku yahay kan ugu muhiimsan dhammaan qaybaha. Isaga oo sii sharraxaya sida ay dhammaantood isugu xidhan yihiin.
Wuxuu u sababeeyay guuldarada ururka inay sabab u tahay waxbarashada oo liidata maxaa yeelay si kasta oo ay shirkaddu u kharash garayso inay ku sii jirto suuqa haddii aysan diyaar u ahayn inay wax ka bartaan qaladaadkooda oo ay si fiican isu qalabeeyaan markaa way ku guuldaraysan doonaan mustaqbalka fog.
Dib u eegista Buugga Anshaxa Shanaad waxa ay eegtaa sida shirkaduhu aanay si toos ah u xalin dhibaatooyinkooda balse ay ula shaqeeyaan nuqul ka mid ah naafanimadooda.
Waxa uu sheegay in xalku uu yahay in si dhab ah loo ogaado waxa uu ururka doonayo iyo in laga shaqeeyo sidii loo gaari lahaa si karti leh taasoo ay tahay in shaqsiyaadka iyo ururka ay fiiro gaar ah u yeeshaan guud ahaan.
Dib-u-eegidda Buugga Anshaxa Shanaad waxaa loogu talagalay kuwa baran doona oo horumarin doona naftooda iyo ururadooda.
Wuxuu sharxayaa inaan sameyn karno wax kasta oo aan rabno inaan sameyno nolosha illaa iyo inta aan leenahay edbinta inaan sidaas sameyno.
Dib-u-eegista Buugga Anshaxa Shanaad wuxuu bixiyaa is-hanweyn iyo jihayn hoggaamineed iyo aragti weyn oo ku saabsan maareynta urur.
Peter Senge wuxuu ku qaatay waqtigan midkan wuxuuna garaacay dhammaan wixii aan filayay markii aan akhriyay buugga. Ma aha nooca buugga aad hadda uun ka soo qaadatid dukaanka oo aad neecaw iska qaaddo, ee waa buug ay tahay inaad si qoto dheer u falanqayso oo aad u raacdo tallaabo kasta oo maalinta ah.
Waa inaad waqtigaaga qaadataa si aad si taxaddar leh u dhuuxdo dhammaan waxa Peter Senge ku bixin karo buugga.
Waxaan aad ugu talinayaa oo aan si farxad leh u siin doonaa buugga afar xiddigle.
Anshaxa Shanaad Peter Senge waa buug weyn oo la akhriyo haddii aad leedahay bilow ama shirkad, aad si firfircoon uga dhex shaqaynayso.
Akhri: Dib u eegista Buugga Farxadda: Farxadda waarta ee Isbeddelka
Su'aalaha La Isweydiiyo ee Dib -u -Eegista Buugga Anshaxa Shanaad
Waa maxay edbintu?
Tani waa dhaqanka lagu tababaro dadka in ay ku dhegganaadaan xeerka hab-dhaqanka iyadoo la isticmaalayo ciqaabta si loo saxo wax kasta oo dhaqan xumo ah.
Maxay nidaamyadu ka fikirayaan?
Waa hab diiradda saaraya sida nidaamku uga kooban yahay qaybo ka mid ah iyo sida ay dhammaantood ula xidhiidhaan macnaha guud.
Waa maxay is-edbin?
Is-edbintu waa awoodda aad ku adkaysan karto waxaad garanayso inay sax tahay oo aad xakamayso daciifnimadaada iyo rabitaankaaga.
Urur noocee ah ayuu qoruhu wax ka qoraa?
Ururka uu Peter Senge kaga hadlay buugiisa ayaa ah ururrada waxbarashada. Qaab dhismeed ay ururadu u adeegsan jireen inay ka gudbaan dhaliilahooda.
Maxay Edbinta Shanaad muhiim u tahay?
Anshaxa Shanaad Peter Senge waa muhiim maxaa yeelay waxay ka caawisaa ururrada inay la qabsadaan oo ay ku beddelaan adduunyo firfircoon oo kakan.
Dib-u-eegidda Buugga Anshaxa Shanaad waxa ay sharraxaysaa sida muhiimka ah ee anshaxa, barashada, iyo is-xakamaynta ay u beddeli karaan ururradayada oo ay u noolaan karaan.
Qaabkiisa Maskaxeed, wuxuu ku sharaxayaa sida aragtideena adduunka iyo caqiidooyinkayaga guud ay u saamayn karto nolosheena iyo sida aan u shaqayno.
Waa akhrin aad u wanaagsan waxayna wax ka beddeli doontaa aragtidaada ku aaddan barashada iyo is -barashada naftaada.
Taleefannada android iyo iPhone waxay u fureen isticmaaleyaashooda fursado badan oo maantana ah ciyaaro badan oo horumarsan…
Weligaa ma rabtay inaad hesho mushahar nololeed intaad fasaxa ku jirto? World Ventures waa hal madal oo…
10 Xabsi Ee Dunida Ugu Khatarsan
Marar badan waxaan u qaadannaa xabsiyada inay yihiin xarumo dhaqan -celin oo lagu dhaqan -celiyo sharci -yaqaannada iyo kuwa ka soo horjeeda…
Dib -u -eegista App -ka Nicehash 202220: Sida Lacag Loogu Sameeyo | Sharci ama Fadeexad